keeg - Wiktionary
Keeg shukulaatada Jarmal
soomaali[wax ka badal]
Magac[wax ka badal]
Keeg waa nooc ka mid ah rooti ama rooti cunto-sida. In qaabkeeda oo casri ah, waxa caadi ahaan waa macmacaan ah dubay macaan. In qaabkeeda qadiimisan, oo moofo bay ahaayeen sida caadiga ah la shiilay rootiga ama cheesecakes, iyo si caadi ah lahaa qaab saxan a. Go'aaminta in cunto la siiyo waa in lagu tilmaamay inay rooti, keeg, ama cajiin noqon kartaa wax adag.
Keeg casriga ah, gaar ahaan daaha keega, sida caadiga ah waxa ku jira isku dhafan oo bur ah, sonkorta, ukunta, iyo subag ama saliid, qaar ka noocyo sidoo kale u baahan in dareeraha ah (sida caadiga ah caano ama biyo) iyo wakiilada (sida khamiir ama budada dubista).
Maaddooyinka ku Flavorful sida sooska miro, lawska, miraha la qalajiyay, ama u habayn ah waxaa badanaa lagu daray, iyo substitutions badan for ah maaddooyinka aasaasiga ah waa u suurtoobaan. Keega waxaa inta badan ka buuxsamay dhaqaalaysa miro ama suugada macmacaan (sida kareem cajiin), allaale leh buttercream ama Yoonis kale, iyo yuulka qurbajoogta, xuduudaha la yeedhiyo ama waxa miro.
Waxaa laga keenay "https://so.wiktionary.org/w/index.php?title=keeg&oldid=18924"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Abriil 2017, marka ee eheed 17:27.